Inona no Dikan’ilay Marika hoe 666? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kachin Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Myama Norvezianina Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Silianina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Tzotzil Télougou Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Asehon’ny boky farany ao amin’ny Baiboly fa marika na anarana iantsoana an’ilay bibidia manana loha fito sy tandroka folo, izay niakatra avy any an-dranomasina, ilay hoe 666. (Apokalypsy 13:1, 17, 18) Io bibidia io no famantarana ny fitondrana ara-politika eran-tany, izay manana fahefana amin’ny “foko sy vahoaka sy olona samy hafa fiteny ary firenena rehetra.” (Apokalypsy 13:7) Hita avy amin’ilay anarana hoe 666 fa tsy mahomby eo anatrehan’Andriamanitra ny fitondrana ara-politika. Nahoana?
Tsy anarana apetapetaka fotsiny. Misy dikany daholo ny anarana omen’Andriamanitra. Novany hoe Abrahama, izay midika hoe “Rain’ny Maro”, ohatra, ny anaran’i Abrama, izay midika hoe “Rain’ny Fisandratana.” (Genesisy 17:5, fanamarihana ambany pejy) Nampanantena an’i Abrahama mantsy Andriamanitra fa ho lasa “rain’ny firenena maro” izy. Nataony hoe 666 koa ny anaran’ilay bibidia noho ny toetra mampiavaka azy io.
Midika hoe misy tsininy ny isa enina. Matetika no misy heviny an’ohatra ny isa ao amin’ny Baiboly. Ny isa fito, ohatra, midika hoe feno na lavorary. Fito latsaka iray ny enina, ka entina ilazana zavatra tsy feno na misy tsininy eo imason’Andriamanitra. Misy ifandraisany amin’ny fahavalon’Andriamanitra koa ny isa enina.—1 Tantara 20:6; Daniela 3:1.
Midika ho fanamafisana ilay izy averina intelo. Matetika ny Baiboly no mamerina hevitra intelo, rehefa tiany hohamafisina ilay izy. (Apokalypsy 4:8; 8:13) Tian’Andriamanitra hoantitranterina amin’ilay anarana hoe 666 àry fa tena tsy mahomby ny fitondran’olombelona. Tsy mahavita mampisy fiadanana sy filaminana maharitra izy ireo, fa ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no mahavita an’izany.
Ny marik’ilay bibidia
Milaza ny Baiboly fa nandray “ny mariky ny bibidia” ny olona, satria nanaraka azy sady “nitolagaga taminy” ary nivavaka taminy mihitsy aza. (Apokalypsy 13:3, 4; 16:2) Manao an’izany izy ireo rehefa manindrahindra ny fireneny, ny sainam-pireneny, na ny tafi-panjakany. Milaza ilay boky hoe The Encyclopedia of Religion fa “lasa anisan’ny karazana fivavahana tena mahazo laka izao ny fanindrahindram-pirenena.” *
Voalaza fa misy an’io marika io eo amin’ny tanana havanan’ny olona iray na ny handriny. Inona no dikan’izany? (Apokalypsy 13:16) Nilaza tamin’ny firenen’Israely Andriamanitra hoe: “Afatory ho famantarana eo amin’ny tananareo [ny teniko], ary ataovy fehiloha eo amin’ny handrinareo.” (Deoteronomia 11:18) Tsy ara-bakiteny akory izany, fa midika hoe ny tenin’Andriamanitra no tokony hibaiko azy ireo amin’izay rehetra ataony sy eritreretiny. Tsy soratana ara-bakiteny koa ilay marika hoe 666. Tsy atao toy ny tombokavatsa izy io. Azo lazaina hoe mitondra azy io ny olona, rehefa miantehitra amin’ny fitondrana ara-politika, ka toy ny hoe izy io no mibaiko ny fiainany. Manohitra an’Andriamanitra ny olona mitondra ny mariky ny bibidia.—Apokalypsy 14:9, 10; 19:19-21.
^ feh. 8 Jereo koa ny boky Nationalism in a Global Era, pejy 134, sy ny boky Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, pejy 94.
Lazain’ny Baiboly fa tsy hisy intsony ny faharatsiana. Ahoana no hitrangan’izany ary rahoviana?